Mpianatra Turkmen: Nandositra an’i Okraina rotidrotiky ny ady · Global Voices teny Malagasy
Tsy ampy ny fanohanan'ny governemanta, nisitra tambajotra sosialy ireo mpianatra Turkmen
Voadika ny 16 Marsa 2022 6:06 GMT
Mpianatra Turkmen avy any Kharkov ao amin'ny trano fialofana vonjimaika. Sary avy amin'i Vasile Vlaşin.
Mpianatra Turkmen maro no tonga any Okraina isan-taona hanovo fianarana tsara kokoa. Mpianatra an-jatony anefa no tojo fahasahiranana nanomboka tamin'ny nanafihan'i Rosia an’i Okraina rehefa niezaka nandositra ny daroka baomba any Okraina, tsy nisy fanampiana avy amin'ny governemantany.
“Any Odessa ny zanako, ary mitady fomba hamoahana azy ireo any aho izao… Mba zarao azafady raha manana fampahalalana momba ny fiampitana sisintany ianareo.” Nozaraina tao amin'ilay vondrona Facebook “Avy any Turkmenistan izahay” tamin'ny 4 martsa ity hafatry ny reny mahavaky fo ity.
Fifanampiana mandeha ho azy
Nasaina nanatona ny masoivohony ny ankamaroan'ny mpila ravinahitra mba haka loharanom-pitaovana sy fitarihana raha sendra misy ny hamehana. Indrisy anefa, nandritra ny andro vitsivitsy voalohany tamin'ny ady nataon'i Rosia ao Okraina, tsy nisy fanampiana firy nataon’ny masoivoho Turkmen ho an’ny mpianatra sy ny olom-pirenena tavela any Okraina. Tsy misy naoty avy amin’ny masoivoho ao amin'ny tranonkalany milaza ny fitsipika amin’ny famindran-toerana. Ny sarin'ny Filohan'i Turkmenistan mitsiky kosa no hita ao, miaraka amin'ny fanamarihana hoe: “Turkmenistan tsy miandany, minamana, manorina ary manaja ny fifandraisana amin’ny fanjakana rehetra, manorina fiaraha-miasa amin'ny Firenena Mikambana sy ny sampan-draharaha manokana mifandray aminy, mandray anjara amin'ny asan'ny fikambanana manan-kaja hafa izay mamorona fahafahana tsara ho an'ny firenentsika handray anjara amin'ny fomba mahomby kokoa amin'ny famahana ny olana lehibe indrindra amin'ny tontolo maoderina.”
Nanery ireo mpianatra Turkmen sasany hitady vahaolana ho azy ireo manokana ny tsy fahampian'ny fampahalalana, ka maro no niantehitra tamin'ny tambajotra sosialy. Nanomboka nifanakalo vaovao sy fampahalalana tamin'ny alalan'ny resaka ifanakalozana tao amin'ny Telegram, WhatsApp, FaceBook, ary Instagram ny mpianatra.
Raha niandry ny baikon'ny lehibeny tao Ashgabat, renivohitr'i Turkmenistan, ireo diplaomatin’i Turkmenistan, dia nandray andraikitra avy hatrany, nanambara ny famindran-toerana sy ny loharanom-baovao kosa ireo avy any amin'ireo firenena manodidina any Azia Afovoany, toa an’i Uzbekistan.
Hatreto, tsy mbola namoaka fanambarana ofisialy momba ny herisetran'i Rosia tao Okraina ny governemantan'i Turkmenistan. Ankoatra izany, nitsahatra tsy namaly ireo antso an-telefaona taorian'ny andro fahatelon'ny ady tany Okraina ny Masoivohon'i Turkmenistan ao Kyiv, izay mbola niasa tamin'ny fomba ofisialy.
Tsy mitantara momba ny ady ao Okraina mihitsy ny fampitam-baovaom-panjakana. Matetika ny olona no mijery ny fandaharana amin'ny fahitalavitra ao Rosia amin'ny alàlan'ny zanabolana ary tsy mahita afatsy fampielezan-kevitra Rosiana, satria voasakana avokoa ny ankamaroan'ny famoaham-baovao hafa.
Kaonty twitter miafina
Tamin'ny 3 Martsa 2022, nipoaka ny resabe tao amin'ny vondrona Facebook “Avy any Turkmenistan izahay” momba ny kaonty Twitter vao noforonina an’ny Masoivohon'i Turkmenistan ao Kyiv.
Tamin'ny 5 sy 6 Martsa 2022, nafindra niala tao an-tanànan'i Nikolaev namakivaky ny tanànan'i Odessa ho any amin'ny sisintanin'i Romania ireo mpianatra avy any Turkmenistan mianatra ao amin'ny oniversite Nikolaev.
Niseho tamin'ny 28 febroary ny fanambarana voalohany tao amin'ity kaonty Twitter ity, mandrisika ny olom-pirenena hanaraka ny toromarika sy ny hafatry ny manampahefana ao an-toerana ao Okraina mba hiantohana ny fiarovana azy ireo sy hanarahany ny fitsipiky ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina. Notanisainy ireo laharana ifandraisana tamin’izany mba hahazoana vaovao momba ny famindrana toerana ary hampahafantarana ny olom-pirenena fa mbola miasa feno ny Masoivoho.
Nivoaka tamin'ny 2 Martsa ny sioka iray hafa, milaza fa tokony hifandray maika amin'ny Masoivohon'i Turkmenistan ireo olom-pirenen'i Turkmenistan izay ao Kyiv ary maniry ny hiala ao. Mivaky ny fanambarana fa efa niampita ny sisintany Poloney sy Romania ny ankamaroan'ireo olom-pirenena ireo; miomana hiampita sisintany tsy ho ela ireo olona ambiny. Nilaza ny sioka tamin'ny 2 Martsa fa nanampy ny olom-pirenena Turkmenistan ny Masoivoho hiala amin'ny gara ao Kyiv mankany amin'ny faritra andrefan'i Okraina.
Na dia tsy mbola misy aza ny angondrakitra momba ny isan'ny olona nafindra toerana, dia olona miisa 72 monja no manjohy ilay kaonty ary azo inoana fa olona vitsivitsy ihany no manaraka azy, satria tsy mivoaka ao amin'ny tranonkala ofisialin'ny governemanta ny vaovao.
Famindrana any amin'ny tsy fantatra: Ny tantaran'i Samir sy ny havany
Nanapa-kevitra ny handao ny tanàna miaraka amin'ny fianakaviany i Samir, 28 taona, teratany avy any Turkmenistan ary monina ao Kyiv tamin'ny 26 Febroary 2022. Miasa sy mipetraka any Prague, Czechia ny renin'i Samir sy ny anabaviny roa. Noho izany, naniry ny hamonjy ny fianakaviany tamin’ny fiampitana ny sisintanin’i Okraina sy Romania izy mba ho any Tsekia. Rehefa avy niantso ny Masoivohon'i Turkmenistan ao Kyiv izy ary tsy nahazo fanampiana avy amin'ny birao dia nanapa-kevitra ny hihetsika. Talohan'izay, niantso ny Masoivohon'i Turkmenistan any Romania ny anabavin’i Samir mba hahazoana vaovao momba ny teratany Turkmen miampita sisintany. Nampahafantatra azy ny kaonsily ao Romania fa rehefa tonga any Romania ny teratany Turkmen, dia asian’izy ireo fitomboka ny pasipaorony ary hosoratana ao amin'ny “polisy misahana ny vahiny” eo an-toerana. Nilaza ny kaonsily fa hijanona ao amin'ny firenena mandritra ny fotoana tsy voafetra izy ireo ary hangataka visa hijanona ao Romania mandra-pihatsaran'ny toe-draharaha. Nampiany koa fa tokony hifandray amin'ny masoivoho Turkmen izy ireo mba hisoratra anarana rehefa tonga.
Niampita ny sisintany ihany izy ireo rehefa avy nanao dia lavitra namakivaky ny lalana feno olona. Saingy hafa ny valinteny azon’izy ireo rehefa niantso ny Masoivohon'i Turkmenistan any Romania: 5-10 andro ihany no ahafahan’ireo mijanona ao amin'ny firenena ary “tena soso-kevitra tsara ho azy ireo” ny miainga mankany Torkia izay ahafahany mahazo fanampiana avy amin'ny Turkmens eo an-toerana. Natoky ny masoivoho ary nandao ny firenena izy ireo rehefa tsy nisy ny loharanom-baovao na fanohanana tany Romania ho azy ireo.
Na izany aza, nilaza ny mpisolovava sy ny tompon'andraikitra ONG nifandray tamin'izy ireo fa afaka mangataka visa ny teratany Turkmen rehefa tafiditra ao Romania, midika izany fa tsy mila miala ao izy ireo. Ankoatra izay, misy ny fifanekena vaovao milaza fa afaka miditra mora foana amin'ny oniversite Romaniana eo an-toerana hanohy ny fianarany ny mpianatra mianatra any Okraina.
Araka ny Turkmennews, tapa-bolana talohan'ny fipoahan'ny ady tany Okraina, niantso ny Masoivohon'i Turkmenistan ny mponina Turkmen sasany tao Kyiv ary nanontany raha hisy ny famindran-toerana ny mpianatra sy ny mpiray tanindrazana raha mipoaka ny ady. “Tsy hisy ny baomba milatsaka!” hoy anefa ireo tompon’andraikitra raha namaly.
Nivadika ho fitokana-monina ny tsy fiandaniana
Ka inona ary izany no ao ambadik'ity tsy firaharahiana miharihary ity sy ny fihetsika milona manoloana ny ady ao Okraina? Nahazo ny fahaleovantenany tamin’ny Firaisana Sovietika i Turkmenistan tamin’ny volana Oktobra 1991. Milaza ny Lalàm-panorenan’i Turkmenistan fa fanjakana demokratika sy ara-dalàna ary laika izy, ary maka ny endriky ny repoblika prezidensialy ny governemanta. Manohy ny satan’ny tsy fiandaniany ny atsy na ny aroa amin'ny politikany ivelany izy, izay nankatoavin'ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana tamin'ny 12 Desambra 1995.
Na izany aza, na dia eo aza ireo fanambarana an-taratasy ireo, miaina eo ambanin'ny lalàna fitondrana tsy refesi-mandidy ny vahoakan'i Turkmenistan. Voafehy amin’ny fomba henjana sy voasivana ny fampitam-baovao eo an-toerana ary voafetra ny fidirana amin'ny sehatry ny tambajotra sosialy, lafo ary tsy ahafahan’ny ankamaroan'ny olona idirana izany. Mihatra amin'ny rafitra fanabeazana toy izany koa ny famerana sy ny sivana.
Amin'ny ankapobeny izany dia manazava ny antony mahatonga ireo mpianatra Turkmen maro be, izay kely ny fahafahany mianatra any amin'ny fireneny nefa mbola miteny sy mahay ny fiteny Rosiana, hisafidy ny firenena miteny Rosiana hanombohana ny fianarany. Ohatra, 30,600 ny isan'ny mpianatra Turkmen ao amin'ny Federasiona Rosiana. Latsaky ny 10 isanjaton'ny isan'ny nahazo diplaoma amin'ny sekoly ambaratonga faharoa no fetra ho an’ny mpianatra mahazo miditra ka vonona ny hanohy ny fampianarana ambony kokoa. Sakana ho an’ny tanora ao amin’ny firenena ihany koa ny fanaovana kolikoly. Misy toeram-pampianarana ambony miisa 21 ao Turkmenistan. Mandray mpianatra miisa 8 000 eo ho eo isan-taona ny oniversiten'ny firenena. Tombanana eo amin'ny enina tapitrisa eo ho eo ny fitambaran'ny mponina ao amin'ny firenena.
Okraina no iray amin'ireo toerana malaza nosafidin'ny tanora Turkmen hianarana miaraka amin'i Belarosia, ny Federasiona Rosiana, Ozbekistan, Kazakhstan, Tajikistan. Vitsy kokoa ny mankany amin'ny firenena Tandrefana noho ny fahasahiranana amin'ny fahazoana visa sy ny halafosan'ny vidim-piainana sy ny fampianarana any Andrefana. Sarotra ny mahazo vaovao momba ny isan'ny mpianatra mianatra any ivelany satria tsy sahy manome antontanisa ho an'ny besinimaro ireo manampahefana ao amin'ny governemanta Turkmen. Nanoratra ny Hindustan Times fa anisan'ny firenena 10 voalohany iavian'ny mpianatra iraisam-pirenena ao Okraina miaraka amin'i India, Maraoka, Azerbaijan, Nizeria, Shina, Torkia, Israely ary Ozbekistan i Turkmenistan. Misy loharanom-baovao milaza fa mety ho 6.000 ny mpianatra Turkmen ao Okraina.
Ho an'ny vaovao misimisy momba ity lohahevitra ity, araho ny fitantaranay manokana momba ny Rosia manafika an'i Okraina.